Kuratidza zvinyorwa neelebheri cov
Ndine here kana kuti handina coronavirus?
Iyo ichangobva kuvandudzwa mibvunzo yepamhepo yekuongorora mukana wekutapukirwa neconavirus Cov-19 yakagadzirirwa kuderedza kushinha kwevashandi vezvehutano. Czech uye vekunze makambani tekinoroji mukubatana ne Ministry of Industry uye Trade uye yakakosha yefoni nhare 1212 yakatora mukukudziridza kwayo.
Izvi zvakaziviswa mumapepanhau zvakaburitswa ne Ministry of Industry and Trade uye Mutumut's inishuwarenzi yehupenyu, imwe yemakambani ari kumashure kwebvunzo. Iyo mibvunzo yemibvunzo inowanikwa paInternet koronavirustest.online.
Ino saiti inoshandisa ruzivo kubva kune dzakasununguka kuwanikwa paInternet, senge masosi uye mafambisirwo enharaunda ehurumende hutano masangano, pamwe nenhau dzinovimbika. Pakutanga yakagadziridzwa maminetsi gumi, asi ikozvino maminetsi ese. Kuwedzera kune…